किन दोहोर्‍याएर यौ’न स’म्बन्ध राख्न मन लाग्छ ? – NepalajaMedia
किन दोहोर्‍याएर यौ’न स’म्बन्ध राख्न मन लाग्छ ?
January 27, 2021 199
यौ-न उ-त्तेजना र यौ-नस’म्पर्कको सञ्चालन
यौ-न चाह’ना हामीलाई प्रकृतिले दिएको एक विशेषता हो र सबै स्वस्थ व्यक्तिमा यौ-न चाह’ना हुन्छ । यो हाम्रो वंश निरन्तरताका लागि आवश्यक छ । यौ-नसम्बन्धी हाम्रा चासो तथा चाहनाहरू मस्तिष्कबाट सुरु हुन्छन् ।
मस्तिष्कको Hypothalamus भन्ने सानो अं’गले यौ-नसम्प’र्क राख्ने जस्ता आधारभूत व्यग्रता प्राणीमा उत्पन्न गर्छ भने अर्को अङ्ग CerebralCortex ले हामीले सिकेका कुरा तथा अनुभवहरूलाई अभिलेख राख्ने कार्य गर्छ । यौ-न सं’वेदनशीलतासम्बन्धी कुराहरू पनि यसै भागबाट सञ्चालित हुन्छन् ।
यौ-न इ’च्छालाई प्रभावित पार्ने ह’र्मोनहरूको उत्पादन तथा सञ्चालनमा पनि मस्तिष्कको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यी सबै कुराहरूको संयुक्त प्रभावबाट नै यौ-नस’म्बन्धी क्रियाकलापहरू निर्देशित हुन्छन् । यौ-नसम्प’र्क होस् वा अन्य यौ-न क्रि’याकलाप ती वास्तवमा शारी’रिक तथा मा’नसिक दुवैको समन्वयमा हुने एक जटिल प्रक्रिया हो ।
मोटामोटी रूपमा हेर्दा यौ-ने’च्छाको सञ्चालनमा विभिन्न प्रणालीहरू सक्रिय देखिन्छन् । एक त इन्डोक्राइन सिस्टमअन्तर्गतका रागरसहरूले सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भने अर्कोतिर इन्द्रीय प्रणालीका अनि मस्तिष्कले ।
ह’र्मोनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा Testosterone को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यौ-न व्यग्रता वा चाहना अर्थात Libido हुन यो ह’र्मोनको निश्चित मात्रा व्यक्तिमा हुनु आवश्यक छ ।
यौ-न उ-त्तेजनाको सुरुवातदेखि त्यसको अन्त्यसम्मको कुरालाई हेर्दा हाम्रो शरीरमा केही परिवर्तनहरू एक निश्चित प्रकारले भएका देखिन्छन् । सो यौ-न उ-त्तेजना प्रति हाम्रो शरीरले देखाएको प्रतिक्रया भएर नै यसलाई मानव यौ-न प्रतिक्रिया चक्र भनिन्छ र अंग्रेजीमा हयुमन से-क्सुअल रेस्पोन्स साइकल भनिन्छ । यसका ४ चरणहरू ExcitementPhase, Plateau Phase, Or’gasm Phase तथा ResolutionPhase हुन् ।
यो प्रणालीले हामीलाई सुख वा आ-नन्द दिने कुरा तिर निरन्तर आकर्षित गर्छ त्यो खाना, नशा-लु वस्तुको प्रयोग होस् वा यौ-नस’म्पर्क । त्यसैगरी दु:ख वा पी’डादायक कुराबाट टाढा बस्न लगाउाछ ।
हामी किन बारम्बार यौ-नस’म्पर्क राख्न लालायित हुन्छौं त ?
हामीले मानव यौ-न प्रतिक्रिया चक्रलाई केलाएर हेर्‍यौं भने त्यसमा प्राप्त हुने सुखलाई स्वर्गी-य सुख भनिन्छ, त्यसैले यसलाई च-रमसुख नै नाम दिइएको छ । भनिन्छ, यो मानवले प्राप्त गर्ने सुखहरूमध्ये सबैभन्दा उत्तम सुख हो । त्यसैले यो स्वाभाविक हो कि कुनै पनि व्यक्ति यस्तो सुख प्राप्त गर्न ला’लायित हुन्छन् । उसले सो सुख पुन: प्राप्त गरेमा उसले सो सुख फेरि पनि प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छ र यसले निरन्तरता पाउँछ ।
यो कसरी सञ्चालित हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा पनि एकपल्ट नियालेर हेरौं । यस्ता प्रक्रियालाई सञ्चालन गर्ने पुरस्कार प्रणाली (Rewardsystem) भनिन्छ । यो प्रणालीले हामीलाई सुख वा आ-नन्द दिने कुरा तिर निरन्तर आकर्षित गर्छ त्यो खाना, नशा-लु वस्तुको प्रयोग होस् वा यौ-नस’म्पर्क । त्यसैगरी दु:ख वा पी’डादायक कुराबाट टाढा बस्न लगाउाछ । यस क्रममा हाम्रो मस्ति’ष्कको विभिन्न भागबाट हुने कार्यको संयोजनको कार्य भने Striatum भन्ने भागले गर्छ ।
यो प्रक्रियामा Dopamine भनिने Neuro-Transmitter को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कुनै आनन्ददायी क्रियाकलापभन्दा पहिले जति बढी मात्रामा Dopamine म’स्तिष्कमा निस्कन्छ त्यति नै बढी आ’नन्द प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ । यसको केही मात्रामा अनुभव भए पछि, मस्तिष्कमा स्मृति ( Memory) बन्दछ र यही स्मृतिको आधारमा हामीले केही निश्चित क्रियाकलाप आन’न्ददायी हुने अपेक्षा गर्छाैं । हामीले प्राप्त गर्ने आ’नन्द हाम्रो शरीरमा प्राकृतिक रूपमा नै हुने यउष्यष्मक को कारणले प्राप्त हुन्छ । Dopamine निस्किए पछि Opioids निस्कन्छन् ।
अब त पक्कै नै बुझ्नु भयो होला कि किन एकपल्ट यौ-न स’म्पर्क गरे पछ फेरि–फेरि यौ-नस’म्पर्क गर्न मन लाग्छ । गहिरिएर हेर्ने हो भने मस्तिष्कको यस्तो पुरस्कार प्रणाली मानवलगायत सबै जसो नै प्राणीमा हुनुले उक्त प्राणीको वंशजलाई निरन्तरता दिन प्रकृति ले नै दिएको वरदान हो भन्न सक्छौं ।
Prevयस्तो ५ किसिमका, रोगीले भुलेर पनि लसुन नखानुस्, नत्र तपाईलाइ हुनसक्छ खतरनाकअसर…
Nextयस्तो जाडोमा आगो लागेर घर नष्ट हुँदा २५ परिवारको विजोक
नवग्रहलाई खुसी पारेर भाग्य चम्काउँन यसरी प्रयोग गर्नुहोस शंख पूरा पढेर ॐ लेखी एक सेयर गर्दिनुहोस् तपाइको भाग्य चम्किनेछ !